ဆီ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာလည်း ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြတဲ့နေရာတွေမှာ အ
သုံးပြုကြပါတယ်။ ဆီမပါပြန်ရင်လည်း ဟင်းကစားရတာမကောင်းပြန်ပါဘူး။ ဆီများသွားပြန်ရင်လည်း ရော
ဂါတွေ ရကြပြန်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အညာသားတွေကတော့ ဆီတော်တော် စားတယ်ဗျ။ ဘာပဲပြောေ
ပြာ အညာသားများ ဆီစားကြ၏ပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆီထွက်သီးနှံ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။မြေပဲ၊နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း၊နေကြာ စတဲ့ အသီးအနှံတွေဖြစ်ပါ
တယ်။အဲဒီအထဲကမှ မြေပဲပင်နဲ့ နှမ်းပင်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို ပြောပြပါမယ်။ ဆီထွက်သီးနှံများလို့ သုံးလိုက်
လို့ အခြားအရာတွေအတွက် အသုံးမ၀င်ဘူးလို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အခု အဲဒီအပင်တွေရဲ့ အသုံး
မြေပဲပင်=မြေပဲပင်ကို အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။ ပင်ထောင်မျိုးနဲ့ ပင်ပြားမျိုးဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ေ
ထာင်ဆိုတာကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အပင်က မတ်စောက်ပါတယ်။ အဲဒီ ပင်ထောင်ဆိုတဲ့ မြေပဲပင်
က အမြင့်ဆုံး ဒူးခေါင်း သာသာလေးပါပဲ။ မြေပဲအတောင့်ကတော့ အဆံ (၂)စေ့ပါပါတယ်။စိုက်
ပျိုးပုံကတော့ မြေပဲစေ့ကို စိုက်ရတာပါ။ မြေပဲက ချိုတဲ့အတွက် ကြွက်ရော၊ ဆက်ရက်ရော၊ ခိုရော ကြိုက်ပါ
တယ်။ အဲဒီအတွက် စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာ မြေကို လုံအောင်ဖုံးပြီး စိုက်ပျိုးထားမှန်းမသိအောင် လက်ရာတွေ
ကိုဖျက်ရပါတယ်။ အဲလိုမှ လုပ်မထားဘူးဆိုရင် အကုန် ကုန်ပြီသာမှတ်ပါတော့။ အပင်လေး ပေါက်လာပြန်
တော့လည်း ငှက်တွေက အပင်ပေါက်ကလေးတွေကို နှုတ်သီးနဲ့ ဆိတ်ပစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အပင်ပေါ
က်ရင် ငှက်စောင့် သွားရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီမြေပဲပင်ပေါက်လေးတွေကို ဟင်းချိုချက်သောက်ရင်လည်းကော
င်းတယ်၊ သုပ်စားရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။ မြေပဲပင် အရွယ်ရောက်လို့ အပွင့်လေးဝင်လာပြီး တစ်ပါတ်၊
(၁၀)ရက်လောက်နေရင် အပွင့်လေးကနေ အမြစ် ပုံစံလေးထွက်လာပါတယ်။ အဲဒါကို စွယ်ထောက်တယ်
လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲလို စွယ်ထောက် လာပြီဆိုရင်တော့ မြေပဲပင်ကို စွယ်လုံအောင် မြေတွေဖုံးပါတော့။ အဲ
လို ဖုံးလိုက်ရင်တော့ စွယ်ရှိသလောက်လိုက်ဥတာပါ။ (မိုးရွာဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ)။ စွယ်ထောက်တဲ့အချိန်
မြေမဖုံးလိုက်နိုင်ရင်တော့ မြေပဲက အထွက်နည်းတတ်ပါတယ်။ မြေပဲပင် ရင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့
အရွက်တွေက အရင်လိုတော့ စိမ်းမြမနေတော့ပဲ နည်းနည်းပြောင်းလာပါတယ်။ စိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေကတော့
ရက်တွေ မှတ်ပြီးစိုက်ကြတာ။ (၃)လနဲ့ ဥတဲ့ပဲဆိုရင်(၃)လပြည့်ရင် နှုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကေ
တာ့ မြေပဲခင်းထဲရောက်လို့ လူကြီးတွေလစ်ရင် မြေပဲပင်အောက်ကို မြေတွေဖယ်ပြီး မြေပဲဥလေးတွေ ရင့်မ
ရင့် ကြည့်ပါတယ်။ ရင့်ရင်တော့ မြေပဲဥလေးကို ဖြုတ်ပြီး စားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ မြေပြန်ဖုံးထားခဲ့တာပေါ့ဗျ
ာ။ တစ်ခါတစ်လေ လူကြီးတွေ သိသွားရင်တော့ အရိုက်ခံရတာပေါ့..အပင်က နုနုလေး အဲလိုဖော်လိုက်ရင်
မြေပဲ မရင့်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ မြေပဲနှုတ်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ရွာထဲကလူတွေကို ငှားရပါတယ်။
မြေပဲပေးနဲ့ပေါ့..။ မြေပဲနှုတ်တဲ့ သူတွေက အစောကြီးထသွားပြီး မြေပဲတွေကို ရသလောက်နှုတ်ပြီး ပုံထား
ကြပါတယ်။နေပူပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှ မြေပဲဆွတ်ကြတာပါ။ မြေပဲ တစ်တင်းဆို(၂)ပြည်ဖြင့် (၂)ပြည် အဲလိုေ
ပးရပါတယ်။ အဲလိုမြေပဲနှုတ်တဲ့အချိန် ဆိုရင်တော့ မြေပဲပြုတ်တွေအရမ်းပေါတာပါ။ မြေပဲထဲမှာ အလှော်လ
ည်းမကြိုက်၊ အကြော်လည်းမကြိုက်၊ အပြုတ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်။ မြေပဲနှုတ်ချိန်ရော
က်ရင် ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တာပါ(ဟီး..မြေပဲပြုတ်စားရလို့လေ)။မြေပဲတွေ ဆွတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နေ
ပူလှမ်းရပါတယ်။ ဆီကြိတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ မြေပဲတောင့်ကိုအခွံ ခွါ အစေ့လေးတွေကို ကြိတ်ရတာပါ။
ဆီကြိတ်နေစဉ်(ဆီကြိတ်ဆုံ) From Google
ကျွန်တော်တို့ အညာဒေသကတော့ မြေပဲ ပဲ ကြိတ်ကြိတ် ၊နှမ်းပဲကြိတ်ကြိတ် ဆီကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ်တာမဟု
တ်ပါဘူး၊ နွားတစ်ကောင်ကို ဆီဆုံမှာတပ်ပြီး လှည့်တာပါ။ အဲဒီကနေပြီ ဆီရပါတယ်။ ဆုံ ဆီစစ်စစ် ဆိုတာ
အဲဒါကိုပြောတာပေါ့ဗျာ။ ငါးခြောက်ဖုတ်လေးကို ဆုံဆီ စစ်စစ်ကလေးဆမ်းစား အရမ်းကောင်းတာပါ။ ဘာပဲ
ဆမ်းဆမ်း မြေပဲဆီ စစ်စစ်ကလေးကိုပဲ ဆမ်းကြတာပါ။ နှမ်းဆီကိုတော့ ဆမ်းစားခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွ
ာမှာ ဆီဆုံမရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာ နောက်ဘက်က ရွာကိုသွားကြိတ်ရတာပါ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အေ
ဖနဲ့ ဆီကြိတ် လိုက်သွားဖူးပါတယ်။ ဆီကြိတ်တဲ့အချိန်မှာ နွားတစ်ကောင်နဲ့ ကြိတ်ရတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုေ
တာ့ ဆီဆုံ လည်တဲ့အတိုင်း ဆီဆုံစီးခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကမူးနေတာကို အခုပြန်စဉ်းစားရင် အခုမူးနေသ
လိုပါပဲ။ ဆီကြိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ဆီထွေးလို့ပြောတာပဲ..အဲဒီဆီထွေးနဲ့ ထန်းလျက်ကလေးရောပြီးစားရ
တာအရမ်းကောင်းတာ။ နောက်ပြီး မြေပဲဖတ်တွေရပါတယ်။ အဲဒီမြေပဲဖတ်ကိုတော့ နှမ်းဖတ်ချဉ် လည်းလုပ်
စားကြပါတယ်။ ရေစိမ်ပြီး နွားတွေကိုလည်း ကျွေးကြပါတယ်။ (မြေပဲဖတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှမ်းဖတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်
တော်တို့ ဆီကတော့ နဘတ် လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်)။ မြေပဲကိုတော့ မြေပဲယိုတို့ ..စတဲ့ မုန့်တွေလုပ်ပါသေးတ
ယ်။ မြေပဲလှော်ကိုတော့ အထူးသဖြင့် နွေရာသီ နေပူပူမှာ မြေပဲလှော်ပြီး အပျင်းပြေစားကြပါတယ်။ မြေပဲေ
လှာ်နဲ့ ထန်းလျက်ဆိုတာကလည်းအညာမြေနဲ့ ခွဲခြားလို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့။သီချင်းတောင် ရှိသေးတယ်လေ
..ဒေါ်မာမာအေး ဆိုထားတဲ့ ဗွေးတုတ်သီချင်းလေးလေ။
“ငွေစန္ဒာလရထား ထက်ဖျားဝဠာတခို့ သာလို့နေ ဟေ ဟေ ဟေ ငါတို့တတွေ မန်ကျည်းပင်ရင်းမှာ ခြေဆင်းကာပ (အပျင်းဖြေ)၂။ယမင်းပြာနွဲ့ ပျင်းပါနဲ့အေ့ ကြံသကာ ထန်းလျက်ခဲ မြေပဲလှော်နဲ့ တကယ်ဖက်သလေ ဟေ ဟေ ဟေ လက်ဖက်ရည် ပူပူနွေးနွေး ယူပေးပါကွယ့် (သာအေးရေ) ၂ ”။
အဲဒီသီချင်းထဲက စာသားလေးက အညာဒေသရဲ့ ဓလေ့လေးကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ ကြံသကာ၊ ထန်းလျက်ခဲ
၊မြေပဲလှော်နဲ့ လက်ဖက်ရည် ပူပူလေးဟာ အညာဒေသရဲ့ သရေစာ တစ်မျိုးပဲပေါ့။ ပြောပြရင်း ကြံသကာေ
မြေပဲ ပင်ပြားကတော့ အပင်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကို မြေကြီးမှာ နိမ့်နိမ့်လေးပဲရှိပါတယ်။ ပင်ထောင်နဲ့ ပင်ပြ
ားရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ အပင် အနိမ့်၊အမြင့် အနည်းငယ်ကွာပါတယ်။ နောက်ပြီး မြေပဲတောင့်က ကွာပြန်
ပါတယ်။ ပင်ပြားက အတောင့်က အစေ့(၃၊၄)စေ့ပဲပါတာလေ။ပင်ထောင်ကတော့
ကျန်တာကတော့ အားလုံးတူတူပါပဲ။ စိုက်ပျိုးပုံကအစ၊ ရိတ်သိမ်းချိန် အဆုံးထိ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ မြေပဲ
ဆီကတော့ ဟင်းချက်တဲ့အခါ၊ အစားအသောက်လေးတွေကို ဆီဆမ်းစားတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ်။ မြေပဲ
ဆီရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ပုရွက်ဆိတ် ကြိုက်ခြင်းပါပဲ။ မြေပဲဆီ အိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြေပဲ ဆီဗူးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
မြေပဲဆီ စစ်ရင် ပုရွက်ဆိတ် တက်ကိုတက်ပါတယ်။(မြေပဲက အလက်ဂျစ်ရှိတဲ့သူနဲ့တော့ မတည့်ဘူးလို့ပြော
သံကြားဖူးတာပဲ။ အဲဒါကိုတော့ သေချာမသိသေးပါဘူး။ ):)
ကိုင်းဒါလေးကတော့ ဆီထွက်သီးနှံဖြစ်တဲ့ မြေပဲပင်ရဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ။ ဗဟုသုတရကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်
Posted by yar zar at 5:33 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အစ်ကို က ဗဟုသုတ တော်တော်စုံတာပဲနော်။ အညာသားတွေ ဆီစားတာတော့ အဟုတ်ဗျို့။
မြေပဲကို အလှော်လဲမကြိုက်၊ အကြော်လဲမကြိုက်၊ အပြုတ်လဲမကြိုက်...
အဖုတ် တော့ကြိုက်၏ ။ မြေပဲကို အခင်းကလောလောလတ်လတ်နှုတ်ပြီး..
မြေပဲခင်းထဲက နှုတ်ရတဲ့ မြူရွက်လဲ အသုတ်ကြိုက်၏၊ ဘကျောက်တို့ ဗာဂျီးနီးယားမှာတော့ မြူရွက်တွေ နွေရာသီရောက်ရင် ချောင်းထဲမှာ အလေ့ကျပေါက်နေတာ..အမေရိကမှာ မြူရွက်သုတ်စားရတယ်ပြောတာ ဗမာပြည်ကလူတွေ အံ့ဩနေကြတယ်..
မြူရွက်က ဒီမှာလည်း အလေ့ကျပေါက်လို့ နွေရာသီတုန်းက သုပ်စားလိုက်သေးတယ်အစ်ကိုရေ။
ဗဟုသုတတော့ အများကြီးရသွားတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်လည်း အညာက မြေပဲဆီ မှာစားဖူးတယ်။ အမေကပြောတယ် ပဲဆီမှာ အညာက ဆုံဆီကမွှေးတယ်တဲ့။ ကျွန်မ လည်းယှဉ်ကြည့်တာ ဟုတ်တယ်နော် ဆုံဆီက နည်းနည်း ပိုမွှေးတယ်။ ပိုပျစ်တယ်။
မြေပဲက အလာဂျီနဲ့ မတည့်တာတော့ သိပ်မကြားဖူးဘူး။ ချောင်းဆိုးတာတော့ သိတယ်ရှင့်။
မြူရွက်ဆိုလို့ ကိုယ်တို့နေတဲ့ နေရာမှာလည်း
တခါတလေ နွေကျရင် ပေါက်လို့ သုပ်စားဖြစ်တယ်
ဗဟုသုတများစွာ တိုးရပါတယ်။ ကျေးတောသားလေးရေ။ စေတနာပန်းခင်းက မအားလို့ စာလေးတွေ မရေးနိုင်သေးပေမယ့်၊ အလည်လာဘို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သက်ရှိပန်းပွင့်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးမှာပါ။ အောင်မြင်ပါစေ။
အင်းမသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေ အတွက်ကျေးဇူးအကိုရေ..
အရှုပ်တွေလုပ်နေ..အဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ စာဖတ်တာနောက်ကျတာ.
ရန်ကုန်မှာ ဆီဝယ်တော့ ဒါကတော့ မြေပဲဆီစစ်စစ်တဲ့ ဗူးပေါ်ပုရွက်ဆိတ် တက်လားမတက်လားတော့ သတိမထားခဲ့မိဘူး။ (မတက်ဘူးထင်ပါတယ်၊ တက်ရင် သတိထားမိမှာပေါ့နော်၊ ဟိ)အော် မြန်မာပြည်မှာလည်း နေကြာဆီရှိတာပဲလား။ ခုမှပဲ သိတော့တယ်။ ဒီအိန္ဒိယ (အိန္ဒိယလို့ပြောလိုက်ရင် အိန္ဒိယပြည်က ကျယ်လွန်းလို့ ဦးဇင်းတို့နေတဲ့မြို့ကိုပေါ့ ချယ်နိုင်းမြို့မှာပေါ့) နေကြာဆီပဲ သုံးကြတာ။ မြေပဲဆီစားချင်လည်း မရှိဘူး။ နေကြာဆီက မပျစ်ဘူး။ ပြီးတော့ မွှေးလည်းမမွှေးဘူး။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်...
မြေပဲ အကြောင်း တွေရှာဖွေစုဆောင်းနေလို့
သိချင်တာတွေမေးချင်ပါတယ် တင်ထားတာနဲ့ မေးတာနဲ့ ၃နှစ်အတိလောက် ကွာသွားပါပြီ
၁။ မြေပဲတောင့် တင်း = မြေပဲဆံ တင်း အချိုးခန့်မှန်းချေ
၂။ မြေပဲဆံတစ်တင်း= ပိသာ ခန့်မှန်းချေ